Mtukudzi ochemwa pasi rose | Kwayedza
Mtukudzi ochemwa pasi rose
01 Feb, 2019 - 00:02	 2019-01-31T14:31:21+00:00 2019-02-01T00:04:21+00:00 0 Views
Mauto akatakura bhokisi rine mutumbi waTuku
NYIKA yose yakaita seyaungana mudundu reMadziva, kuMashonaland Central nemusi weSvondo wadarika uko kwaichengetwa muimbi anga aine mukurumbira muno nepasi rose, Dr Oliver “Tuku” Mtukudzi. Dr Mtukudzi, avo vakapihwa ruremekedzo rwegamba renyika, vakashaya kuAvenues Clinic, muHarare, nemusi weChitatu 23 Ndira nekuda kwedenda reshuga. Vanga vava nemakore 66 okuberekwa.
Dr Mtukudzi vakaonekedzwa zvine mutsindo nezviuru zvevanhu pamusha pavo paKasimbwi, kwaMutamba, mudunhu reMadziva.
Vasati vanovigwa, mutumbi waDr Mtukudzi wakadarika nepamuzinda wavakavaka wePakare Paye Arts Centre uri kuNorton apo painge pakaungana mazana evanhu vaisanganisira vaimbi neve zvematongerwo enyika.
Chipo chevagari vedhorobha reNorton vose – uko kwaigara Tuku – vakaungana vachichema nekurangarira upenyu hweshasha iyi.
Vabva ikoko, mutumbi wavo wakanopinzwa munhandare huru yenhabvu yeNational Sports Stadium uko kwakaturwa mashoko ekuonekedzana negamba renyika iri. Kwakaridzwawo magitare nevaimbi vakawanda.
Vanhu vakapinda munhandare iyi, vamwe vacho vakaita zvekumukira mangwanani emusi weMugovera, vakapotsa nepadiki vaita zvekufashukira sevakambopindamo apo chikwata chenhabvu chenyika, cheZimbabwe Warriors chakatamba neBrazil makore mashoma apfuura.
Zvose izvi zvakaitika mushure mekunge President Mnangagwa vakatanga kunotura mashoko ekuchema kumhuri yekwaMtukudzi apo vakaenda kumba kwaTuku kuNorton nemusi weChina.
Apa ndipozve pavakazivisa kuti vainge vapa shasha yekuimba iyi ruremekedzo rwegamba renyika. Tuku ndiye muimbi wekutanga kuwana ruremekedzo rwakadai.
President Mnangagwa – avo mashoko avo aitombovharirwa nemhururu nemheterwa dzevanhu vaifadzwa nezvavaitaura parufu urwu kuNorton – vakati musangano wavakaita sebato reZanu-PF wakabvumirana pasina kundandama kuti Dr Mtukudzi vaitwe gamba renyika.
Panguva iyoyo, madandemutande, zvivhitivhiti zvepasi rose zvaiburitsa mashoko ekuchema Tuku. Vaimbi vane mukurumbira, vemabhizimisi nevatungamiriri vedzimwe nyika saPresident Cyril Ramaphosa vekuSouth Africa newavakatsiva pachigaro ichi, VaJacob Zuma, vakatumirawo mashoko avo ekuchema. Ndizvo zvimwe chetezvo zvakaitwa naPresident Hage Geingob vekuNamibia.
Mumapepanhau emuAfrica, Middle East, Europe nekuAmerica dzaingova nhau dzekuchema Dr Mtukudzi.
Pakuenda kuMadziva, mutumbi waDr Mtukudzi wakatakurwa nechikopokopo kubva kuOne Commando, muHarare ndokurara wava pamusha pavo kubva manheru eMugovera kusvika neSvondo pawazoradzikwa.
Panguva iyi, vanhu vakange vava mavhu nemarara pamusha apa.
Gurukota rekudzivirirwa kwenyika, Cde Oppah Muchinguri-Kashiri ndivo vakaverenga mashoko aPresident Mnangagwa ayo ainge azere nekurumbidza mushakabvu nekukurudzira kubatana nerunyararo kuzvizvarwa zveZimbabwe.
President Mnangagwa vanoti Dr Mtukudzi aiva muimbi aibatanidza vanhu uye achimiririra nyika nemazvo kwese kwaaifamba.
Vanoti munguva yehondo yeChimurenga chepiri, Dr Mtukudzi vaitaura vakamiririra ruzhinji vachishoropodza vachena avo vainge vakapamba Zimbabwe.
Mamwe makurukota aivepo aisanganisira rezvemitambo netsika, Kirsty Coventry, rezvekufambiswa kwemashoko nenhepfenyuro Cde Monica Mutsvangwa, Cdes Perrance Shiri, Kazembe Kazembe, Sekai Nzenza, Paul Mavima, Mabel Chinomona, Energy Mutodi naFortune Chasi.
Kunyangwe vemapato anopikisa saVaNelson Chamisa naMai Thokozani Khupe veMDC-T vaivapowo.
Vekunze kwenyika, vanosanganisira vaimbi vekuSouth Africa avo vaitungamirirwa naSteve Dyer vakabatana nevaimbi vemuno saBaba naMai Charamba, Alick Macheso, Somandla Ndebele, Nicholas Zacharia, Jah Prayzah nevamwe mukuchema Dr Mtukudzi.
Mabhazi anodarika makumi mana akatakura vanhu kubva kumamatunhu ose enyika vachienda kunoviga gamba Tuku. Kana vedzimotokari vakapisa mafuta vakananga “Dande”.
Vamwewo ndivo vakafamba netsoka kubva kunzvimbo dzakasiyana dzemuMadziva.
Nyangwe vanhu vaichema zvavo gamba, rufu urwu rwakaita kunge mhemberero sezvo vaimbi vakasiyana vakadandaura magitare kubva neMugovera kusvika neSvondo.
Vamwe vakawana mukana wekupura mari sezvo vaitengesa zvekudya nezvimwe zvinopedza nyota.
Vakawanda vari kuti kunyange zvazvo Dr Mtukudzi vakashaya, nziyo dzavo dzicharamba dzichingofarirwa kwenguva yakareba.
Kutaura sezvazviri, Tuku akachemwa nepasi rose!
‘SAHWIRA NDIYE ANONDIGUTSA’...21 Oct, 2019
GUDO RAKABVUTA MOTA. . . nayo mudondo . ...18 Oct, 2019
MAKORE 10 WODHUROPU HAIVHURWE…R...18 Oct, 2019